Iincwadi ezili-10 eziPhezulu zokuHamba zaBathandi beNdalo Iindaba Zokuhamba
Iincwadi ezili-10 zokuhamba kubathandi be-adventure
Lola ifani | 15/04/2021 09:56 | ngokubanzi, Ukuzonwabisa, Uhambo
Ukuhamba yenye yezona zinto zinomdla kwaye zityebisa emhlabeni. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kuyanyanzeleka ukuba sibeke ecaleni umnqweno wethu wokuphonononga ngenxa yesidingo sokuhlala kwindawo esisigxina okanye ngenxa yokungabikho kweeholide. Funda ngeendawo ezikude kwiplanethi kwaye ufunde ngamava abanye abahambi, yindlela elungileyo yokubulala ibug kwaye uqalise ukucwangcisa iindlela zakho ezilandelayo. Ndikushiya kule posi uluhlu lwazo zilungiselelwe mna Iincwadi ezili-10 zokuhamba kubathandi be-adventure Ungaphoswa!
1 Eyona ndlela imfutshane
3 I-Italian Suite: Uhambo oluya eVenice, eTrieste naseSicily
4 Ukuphuma kwelanga eMazantsi mpuma Asia
5 Amaphupha kaJupiter
6 Isikhokelo sabahambi abamsulwa
7 Isithunzi sendlela yeSilika
8 Iihambo ezintlanu esiya esihogweni: IiAdventures kunye nam kunye nokunye
9 Ukuya kwiindlela zasendle
10 Iileta ezintathu ezivela eLos Andes
Eyona ndlela imfutshane
Kwiminyaka eli-12 kamva, intatheli uManuel Leguineche ubalisa "Eyona ndlela imfutshane" iihambo zakhe beziphila njengenxalenye ye- Ukuhanjiswa kweRekhodi yeHlabathi yeTrans, Uhambo oluqale kusingasiqithi kwaye oluthathe abaphambili balo ukuba bahambe ngaphezulu kwe-35000 km nge-4 x 4. Kwakhona libali lenkwenkwe elathi, elinomnqweno ongaphezulu kunamava, lazinyanzela ukuba lizalisekise iphupha: "Jikeleza kwihlabathi".
Olu hambo, olwathatha ngaphezulu kweminyaka emibini, lwadlula Afrika, Asia, Australia kunye neMelika, ngexesha apho amazwe angama-29 kuloo ndlela ayesemfazweni. Ngaphandle kwamathandabuzo, ibali elinomdla kwaye kufuneka ufundelwe abathandi beentlalo ezixelelwe kakuhle.
Jonga ngoku kwiAmazon
Iincwadi zakudala zoncwadi lokuhamba, Ibali lomntu eliqala ebuntwaneni bombhali walo, uBruce Chatwin.
Ukuba ujonga ubungqongqo, ayinakuba yile ncwadi uyikhangelayo, kuba ngamanye amaxesha inyani ixubana neenkumbulo kunye namabali intsomi. Kodwa ukuba uyazama, uyakonwabela uhambo lukaChatwin kwaye uya kufumanisa undoqo wePatagonia, yenye yezona ndawo zomlingo kunye neendawo ezikhethekileyo emhlabeni.
I-Italian Suite: Uhambo oluya eVenice, eTrieste naseSicily
Imveliso yoncwadi kaJavier Reverte, egxile ikakhulu kukhenketho, ngu kucetyiswa kakhulu ukuba uphuphe ngeendawo ezintle ngaphandle kokushiya ikhaya.
I-Suite yase-Italiya: Uhambo oluya eVenice, eTrieste naseSicily phantse lincoko yokubhala apho iReverte isisa kweyona mimandla mihle nenomtsalane e-Itali. Ukongeza, ingxelo yohambo ixutywe ngamabali kunye neenkcukacha zembali ezinceda ukuqonda ngcono le ndawo.
Ukuphuma kwelanga eMazantsi mpuma Asia
Ngubani ongazange acinge ngokwaphula isoyolo? Umbhali we-Dawn kwi-Mpuma-mpuma ye-Asia, u-Carmen Grau, uthathe isigqibo sokuthatha inyathelo eliya phambili kwaye wayeka umsebenzi wakhe ukuze aphile ngamava awayehlala ephupha ngawo. Ubushiyile ubomi bakhe e-Barcelona kwaye waxhotyiswa ngo bhaka, waqalisa uhambo olukhulu.
Kwiinyanga ezisixhenxe wayekhenketha I-Thailand, iLaos, iVietnam, iCambodia, iBurma, iHong Kong, iMalaysia, iSumatra kunye neSingapore. Kwincwadi yakhe, wabelana ngazo zonke iinkcukacha zokuzonwabisa kwakhe, ukuhamba ngeenqanawa, iibhasi, oololiwe kunye nobusuku ehostele.
Kwiphupha likaJupiter intatheli uTed Simon ubalisa uhambo lwakhe lokuhambahamba emhlabeni ekhwele isithuthuthu esiyi-Triumph. USimon waqala uhambo lwakhe ngo-1974, evela e-United Kingdom, kwaye kwiminyaka emine wahamba amazwe angama-45 ewonke. Le ncwadi libali lendlela awayehamba ngayo kumazwekazi amahlanu. Ukuba ungomnye wabo bathanda i-asphalt, awuyi kuphoswa yiyo!
Lungiselela uhambo lwakho
BHALA INDiza yohambo lwakho
Bhuka IHOTELE yohambo lwakho
Eyona misebenzi mihle ngeSpanish
QESHA IMOTO kuhambo
Fumana i-inshurensi YOKUHAMBA nge-5% isaphulelo
Bhukisha INTSHINTSHO yakho kwisikhululo seenqwelomoya
Isikhokelo sabahambi abamsulwa
Ungalindeli isikhokelo sokuhamba esiqhelekileyo xa ufunda le ncwadi. UMark Twain, onokuthi avakale njengesiqhelo kuwe njengomdali kaTom Sayer, wasebenza ngo-1867 kwiphephandaba iAlta California. Kwakuloo nyaka, wemka eNew York uhambo lokuqala lwabakhenkethi kwimbali yanamhlanje kwaye uTwain weza kubhala uthotho lweenkcukacha ngesicelo sephephandaba.
Isikhokelo sabahambi abamsulwa siqokelela Olo hambo lukhulu oluya kumthatha eMelika amse kwiLizwe eliNgcwele kwaye, ngeenkcazo zakhe, ubalisa indlela yakhe yokuhamba kunxweme lweMeditera kunye namazwe anje nge-Egypt, iGrisi okanye iCrimea. Elinye inqaku elifanelekileyo lencwadi yindlela kaTwain yobuqu, unomdla oqhelekileyo oko kwenza ukuba ukufunda kube mnandi kwaye kube mnandi kakhulu.
Isithunzi sendlela yeSilika
UColin Thubron ngumbhali obalulekileyo woncwadi lokuhamba, omnye wabahambi abangadinwayo abahambe ngaphezulu kwesiqingatha sehlabathi kwaye bayayazi indlela yokuyixela kakuhle. Imisebenzi yakhe iye yanikezelwa ngokubanzi kwaye iguqulelwe kwiilwimi ezingaphezu kwama-20. Iincwadi zokuqala ezipapashwe kuhlobo olujolise kwingingqi ye-Mbindi Mpuma kwaye, kamva, iihambo zakhe zafudukela kwi-USSR yangaphambili. A) Ewe, konke ukuhamba kwakhe kwincwadi yokubhala ehamba phakathi kweAsia neEurasia kwaye uqwalasele ubunyani I-X-ray yale ndawo ibanzi yeplanethi apho ungquzulwano, utshintsho kwezopolitiko kunye nembali zixubene namasiko kunye neendawo zomhlaba.
Ngo-2006, uThubron wapapasha I-Shadow ye-Silk Road, incwadi apho abelana ngohambo lwakhe olumangalisayo kwindlela enkulu yomhlaba. Wemka e-China kwaye wadlula kwiindawo ezininzi zase-Asiya ukuya kufikelela kwiintaba ze-Asia eseMbindini, ngaphezulu kweshumi elinanye lamawaka eekhilomitha kwisithuba seenyanga ezisi-8. Eyona nto intle ngale ncwadi lixabiso elinikwa ngamava ombhali wayo. Wayekhe wahamba indawo enkulu kula mazwe kwaye, ebuya emva kweminyaka, engabuyiseli imbali yendlela ebaluleke kakhulu kuphuhliso lwezorhwebo lwaseNtshona, ubonelela ngothelekiso nombono wendlela utshintsho kunye nesiphithiphithi esiguquke ngayo. indawo.
Iihambo ezintlanu esiya esihogweni: IiAdventures kunye nam kunye nokunye
UMartha Gellhorn wayenguvulindlela wentatheli yemfazwe, Intatheli yaseMelika yagubungela ungquzulwano ngenkulungwane yama-XNUMX eYurophu, yagubungela iMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, wayengomnye wabokuqala ukunika ingxelo kwinkampu yoxinaniso yaseDachau (eMunich) waze wabona ubungqina bokuba kwehla iNormandy.
UGellhorn uye wadlula kwezona meko ziyingozi kwiplanethi kwaye umngcipheko ubusoloko uqhubeka kwiihambo zakhe, e Iihambo ezintlanu esiya esihogweni: IiAdventures kunye nam kunye nokunye, uthetha ngezo ngxaki, ngu Ukudityaniswa kwezonahambo zakhe zintle apho ebalisa indlela ajongana noloyiko kunye nobunzima ngaphandle kokuphulukana nethemba. Le ncwadi iqokelela uhambo lwakhe oluya e-China kunye no-Ernest Hemingway ngexesha leMfazwe yesiBini yase-Sino-Japan, uhambo lwakhe ngeCaribbean ekhangela iinkwili zaseJamani, indlela yakhe e-Afrika kunye nokudlula kwakhe e-USSR.
Ukuya kwiindlela zasendle
En Ukuya kwiindlela zasendle Umbhali waseMelika uJon Krakauer ubalisa ibali lika UChristopher Johnson McCandless, umfana waseVirginia owathi ngo-1992, emva kokuphumelela kwiMbali kunye neAnthropology kwiYunivesithi yaseEmory (eAtlanta), Ugqiba kwelokuba anike yonke imali yakhe aze athathe uhambo ezinzulwini zeAlaska. Wemka engavalelisanga kwaye engenazixhobo. Kwiinyanga ezine kamva, abazingeli bafumana umzimba wakhe. Incwadi ayichazi nje kuphela uhambo lukaMcCandless, ungena ebomini bakhe kunye nezizathu Oko kukhokelele umfana osapho olusisityebi ukuba anike utshintsho olukhulu ebomini.
Iileta ezintathu ezivela eLos Andes
Ummandla weentaba weAndes ePeruvia yenye yeendawo zokuthanda kakhulu abathandi bendalo kunye nokhenketho lokuzonwabisa. Kwiileta ezintathu ezivela kwiAndes, umhambi uPatrick Leigh Fermor wabelana ngendlela yakhe ngalo mmandla. Uqale uhambo lwakhe kwisixeko saseCuzco, ngo-1971, ukusuka apho waya e-Urubamba. Abahlobo abahlanu bahamba naye, mhlawumbi ubuntu beqela yenye yezinto ezinomtsalane kweli bali. Olu hambo lwalunezinto ezahluka-hlukeneyo, luquka imbongi ikhatshwa ngumfazi wayo, ingcibi yaseSwitzerland kunye nesacholo, i-anthropologist kwezentlalo, i-Nottinghamshire aristocrat, i-Duke ne-Fermor. Encwadini, ubalisa onke amava eqela, indlela abaxhasana ngayo nangona behluke kakhulu kwaye umbono wabo wehlabathi kunye nencasa yabo yokuhamba ibamanyanisa njani.
Kodwa ngaphaya kwebali, ngokungathandabuzekiyo inomtsalane, iileta ezintathu ezivela eLos Andes Gut uhambo olunomtsalane olusuka esixekweni, lusuka eCuzco, luye kweyona ndawo isemagqabini kwilizwe. Aba bahambi bahlanu basuka ePuno baya eJuni, kufutshane neLake Titicaca, basuka eArequipa baya eLima. Amaphepha ale ncwadi asa kwindawo nganye kwezi Alikho ibali elingcono lokuvala olu luhlu lweencwadi ezili-10 zokuhamba ezihamba phambili kubathandi be-adventure!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Ukuzonwabisa » Iincwadi ezili-10 zokuhamba kubathandi be-adventure
Uvavanyo lwe-Covid olufunwa ngamazwe
Isinxibo esiqhelekileyo saseVeracruz